ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေးတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ – Update News
ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေးတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
မင်းသမီးလေး ခင်ဝင့်ဝါကတော့ ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အလှမယ်ဘွဲ့ကို ရရှိထားသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်… သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ပြသူမရဲ့ရိုးသားဖြူစင်ပြီးမာနကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲရောက်ပြီးအချစ်တွေပိုစေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ မိန်းကလေးပရိသတ်တင်မကပဲ ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်မာရထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝင့်ဝါကတော့ လက်ရှိ အချိန်မှာ လှုပ်ရှား နေတဲ့ ပြည်သူ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ ပြည်သူဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားပြော ဆိုဟန်တွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးထောက်ခံ မှုကို ရရှိ ခဲ့တာ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကျစ်လစ်သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့အပြုံးတွေကြောင့် ပုရိသယောက်ျားတွေ သည်းသည်း လှုပ်ဝန်းရံတာ ကို ခံနေရတဲ့ သူတစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ခင်ဝင့်ဝါက အရင်တုန်းက သူမ မယ်ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်လာခဲ့ပြီး လွမ်းတယ်..အရင်ဘ၀လေးဆိုပြီး တင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. …
သူမတင်လာခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောမန့်လေးတွေနဲ့ အရင်လိုပြန်လည်တွေ့ပြီးပျော်ရွင်ကြဖိို့ကို အချင်းချင်းအားပေးစကားပြောထားကြတာလည်း ရှိပါတယ်. …ပရိသတ်ကြီးလည်း ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…